နည်းပညာပံ့ပိုးမှုထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - တရုတ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုစက်ရုံ
E-mail ကို: 18611302660@163.com
Advertising ကြော်ငြာ CNC
18-11-08 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
သစ်သားထွင်းထုစက်စျေးကွက်ရွေးချယ်မှုများစွာကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, function ကိုအညီအလိုအလျှောက် tool ကို changer လက်သမားလက်သမားထွင်းထုစက်ထွင်းထုစက်နှင့်ပိုပြီးလုပ်ငန်းစဉ်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်လေးဝင်ရိုးသုံးရှုထောင်ထွင်းထုစက်အပြောက် function ကို, နှင့်အထွေထွေ woodwo ရှိပါတယ် ...
1. ပစ္စည်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအရာဝတ္ထုများ၏ပစ္စည်းအစိုင်အခဲသစ်သားနှင့်သစ်သားစုပေါငျးဖြတ်တောက်ခြင်းသစ်သားဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်နေကြသည်။ အစိုင်အခဲသစ်သားနောက်ထပ်ပျော့သစ်သား, ခက်သစ်သားနှင့်သစ်သားပြုပြင်မွမ်းမံသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်; veneer ဖျင်, အထပ်သား, chipboard, directional chipboard, waffl အပါအဝင်သစ်သားအခြေပြုဖွဲ့စည်းမှု, ...
အဘယ်သူသည်စင်ကြယ်၏ဒါ (ထွင်းထု router ကို woodworking) များစွာသောလူယေဘုယျအားဖြင့်, ထို CNC router ကိုဆေးကြောသန့်စင်ရန်မလိုပါကြောင်းထင်မည်, ပေါ်စားပွဲရှင်းလင်းဖို့သင့်လျော်တဲ့အချိန်အတွက်ကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်ဟုဆိုနိုငျတဲ့သစ်သားထွင်းထုစက်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ် မျဉ်း, အဘယ်ကြောင့်? သူတို့က wo ကြောင်းယုံကြည်သောကြောင့် ...
မှန်ကန်စွာအေဒီ CNC ထွင်းထုစက်ကိုင်တွယ်
1. ဓား, ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ် WD40 သန့်စင် Chuck နှင့်ဦးထုပ်ကိုသုံးပါ။ ဖိအားဦးထုပ် 2. Clamp, မဟုတ်ရင်ဒီ tool ကို install ရန်လွယ်ကူသည်။ အဆိုပါ Chuck ဦးထုပ်အတွင်းဖိအားများကဖမ်းမိသည်မဟုတ်လျှင်, ချညှပ်ယင်းမော်တာရိုးတံအပေါ်ရောက်သည်နှင့်မြေပေါ်သို့ချရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၏ရှိမရှိအဆိုပါ Chuck မှ 3. Pay ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု ...
Adress: အခန်းထဲမှာ 1006 နှစ်ခု Chang-Ying ကဒုတိယတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Tian လမ်း, Longhu, Chaoyang မြောက်ပိုင်းလမ်း, Chaoyang ခရိုင်, ဘေဂျင်း။
en ၏ဘုံဒုက္ခနှင့်ပြဿနာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ...
CNC သည် router ၏ဘုံအောင်မြင်မှုများဘာတွေလဲ